2 Samuel 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 4:1-12
Wokum Is-Boset (1-8)
Dawid ma wokum awudifo no (9-12)
4 Bere a Saul ba Is-Boset*+ tee sɛ Abner awu wɔ Hebron no,+ ehu kaa no,* na Israelfo nyinaa nso yɛɛ basaa. 2 Ná Saul ba no wɔ asahene baanu a wɔda asraafo akuw bi a wɔtow hyɛ nkurɔfo so gye wɔn nneɛma ano. Ɔbaako din de Baanah, na ɔbaako nso din de Rekab; wɔyɛ Beerotni Rimon, Benyamin aseni no mma. (Bere bi, na wobu Beerot+ nso sɛ ɛka Benyamin asaase ho. 3 Beerotfo no guan kɔɔ Gitaim+ kɔyɛɛ ahɔho wɔ hɔ, na wɔatena hɔ abesi nnɛ.) 4 Ná Saul ba Yonatan+ wɔ ɔbabarima bi a ɔyɛ obubuafo.*+ Bere a wɔde nkra fi Yesreel+ bɛkaa nea ato Saul ne Yonatan no, na wadi mfe anum, na ɔbea a ɔhwɛ no no faa no sɛ ɔde no reguan. Bere a ɔbea no de ahopopo reguan no, abofra no hwee fam, na ɔbɛyɛɛ obubuafo. Ne din de Mefiboset.+ 5 Beerotni Rimon mma Rekab ne Baanah kɔɔ Is-Boset fi awia ketee; saa bere no, na wada regye n’ahome. 6 Bere a wɔrekɔ ofie hɔ no, wɔyɛɛ wɔn ho sɛ mmarima a wɔrekɔfa hwiit, na wɔde ade wɔɔ ne yam. Ɛnna Rekab ne ne nua Baanah+ guanee a obiara anhu wɔn. 7 Bere a wɔkɔɔ ofie hɔ no, na ɔda ne mpa so wɔ pia mu, na wɔde ade wɔɔ no kum no, na wotwaa ne ti. Wɔde ne ti no sii kwan so nantew anadwo no nyinaa kɔfaa Araba kwan so. 8 Na wɔde Is-Boset+ ti no kɔmaa Dawid wɔ Hebron, na wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Wo tamfo Saul+ a na ɔrepɛ wo akum wo* no+ ba Is-Boset ti ni. Ɛnnɛ, Yehowa atua Saul ne n’asefo so ka ama me wura ɔhene.” 9 Nanso Dawid ka kyerɛɛ Beerotni Rimon mma no, Rekab ne ne nua Baanah sɛ: “Sɛ́ Yehowa a ogyee me* fii ahohia nyinaa mu+ no te ase yi, 10 bere a obi bɛka kyerɛɛ me sɛ, ‘Hwɛ, Saul awu’+ a ɛyɛɛ no sɛ wabɛka asɛmpa no, misoo ne mu kum no+ wɔ Siklag. Ɛno ne akatua a onya fii me hɔ! 11 Na sɛ nnipabɔnefo kokum ɔtreneeni wɔ ɔno ara ne fi wɔ ne mpa so a, wɔn na mede wɔn ho bɛkyɛ wɔn anaa? Meremmisa ne mogya mfi mo nsam+ na merenyi mo mfi asaase so anaa?” 12 Ɛnna Dawid ka maa ne mmerante no kum wɔn.+ Wotwitwaa wɔn nsa ne wɔn nan, ɛnna wɔkɔsɛn wɔn+ wɔ Hebron ɔtare no ho. Is-Boset ti no de, wɔfa kosiei wɔ Abner amusiei hɔ wɔ Hebron.
^ Nt., “Saul ba no.”
^ Nt., “ne nsam gowee.”
^ Anaa “ɔrehwehwɛ wo kra.”
^ Anaa “ogyee me kra.”